မတော်တဆ အသည်းကွဲပြီး ကဗျာဆရာဖြစ်လာသူ ဆရာသစ္စာနီကတော့ သူ့ရဲ့ တခြားဝါသနာက အမဲလိုက်ခြင်း နဲ့ ဖဲရိုက်ခြင်းတဲ့။ အဆိုတော် ဒိုးလုံးကတော့ ဂီတကလွဲပြီး ဘာကို စိတ်ဝင်စားလည်းဆိုတော့ သောက်စားခြင်း နဲ့ မိန်းမတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားပြီး အနုပညာသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်သူပါ။ ဒီလိုပါပဲ ... ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ မလုပ်တတ် လုပ်တတ်နဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခု လုပ်ကြည့်တာပါ။ ဝေဖန် အကြံပြုချက်လေးတွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ရေးတဲ့စာ (5)
ပညာပါရမီ ရေလည်ပရဟိတကျောင်း၊ အုန်းပေါက်ရွာ (1)
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ယောရုဝ နိုင်ငံတော်
အချို့လူများသည် အလွန် စကားများကြ၏။
လှောင်အိမ်ထဲမှာ ငါ မြင်ဖူးသည်။
ထိုသို့ပင် တိတ်ဆိတ်စွာ ပျံသန်းသွားမည်။
တောအုပ်ကို မီးရှို့လိုက ‘လေ’ ၏အကူအညီလိုသည်။
မိတ်ဆွေကောင်းကို လေးမြတ်စွာ ဆက်ဆံမည်။
အင်္ကျီကို လျှော်ဖွပ်ကြ၏။
ငါကား ... ထိုသို့မကျင့်။
ငါ့ကိုယ်ငါ စင်ကြယ်မှုဖြင့် လျှော်ဖွပ်မည်။
တောင်တန်းကြီးများကို မ ရွေ့ရသည့်တိုင်
သူတို့ကိုယ် သူတို့ ပြန်မမြင်ကြရ။
လူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင်ရန်လိုသည်။
ငါကား... အလင်းထဲမှာပဲ ရပ်တည်မည်။
ဆေးလွယ်အိတ်ကို လွယ်ပြီး သူတို့ သေကြသည်။
ငါကား သူတို့ကို မတုပ။
ငါ့ဘ၀၏ အနာရောဂါများကို ထိုဆေးဝါးတို့ဖြင့် ကုမည်။
သူတို့၏ ဆုံးရှုံးမှုကို ငါ ဥပမာယူမည်။
ရေပြင်ကို ပစ်ခတ်သော မိုးကြိုးပမာရှိသည်။
မိမိကိုယ်ကို စောင်းကြိုးညှိခြင်း မပြုကြ။
ငါကား ထိုဂီတကို ကြားလိုလှသည်။
ရှေ့က ရောက်လာသူကိုရော … နောက်မှ ရောက်လာသူကိုပါ ယမမင်းက မေးတယ် …
“ ကဲ … ပြောပါဦး … မင်းတို့ကို ရူးသွားစေလောက်တဲ့ အရာက … ဘာလဲ ? ”
နှစ်ယောက်လုံးက တပြိုင်တည်း ပြန်ဖြေတယ် …
“ …. အာဏာပါ … ”
အားလုံး တိတ်ဆိတ်သွားတယ် …။ နောက်မှ …
“ တောက် … ”
ယမမင်းက `တက်´ ခေါက်တယ် …။
သူတို့ နှစ်ယောက်ကို မသတီသလို ကြည့်ရင်း …
“ ငါတစ်ယောက်တည်းရဲ့ ဆန္ဒ အရဆိုရင် မင်းတို့ မလွယ်ဘူး ” “ ခုတော့ … ဟင်း … ”
ဟိုလူနှစ်ယောက်ကလည်း ပြိုင်တူလိုလို ပြန်ပြောပါတယ် …
“ ခုတော့ … ဘာဖြစ်လို့လည်းဗျ … အဘ ရှိတာပဲဗျာ … ဟဲ ဟဲ ”
ယမမင်း ဒေါသ ထွက်သွားပါတယ် …။
ဟိုလူ နှစ်ယောက်ကိုလည်း ပြန်ဟောက်ပါတယ် …
“ ဟေ့ကောင်တွေ … မင်းတို့ အဘက ကျန်ခဲ့ပြီကွ …
မင်းတို့ အဘကို ပြန် တ နေရမယ့် ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး ”
ဟို နှစ်ယောက် နည်းနည်း အံ့ဩသွားတယ် …။
နောက်တော့မှ … နားလည်သွားသလိုလိုနဲ့ အနားမှာ ရှိတဲ့ တပည့်ကိုယ်စီကို ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်။
လူနှစ်ယောက် ထွက်လာပြီး … ကိုယ်စီ ကိုင်ထားသော ဆာလာအိတ်များထဲမှ US ဒေါ်လာများကို ထုတ်၍ လမ်းသဖွယ် ခင်းကျင်း လိုက်သည်။)
တဒင်္ဂတော့ ယမမင်းကြီး မင်သက်သွားတယ်။
နောက်မှ သတိရပြီး …
“ မင်းတို့ … ဘာလုပ်တာလဲ ? ”
ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်း အရင်လို လေသံနဲ့ပဲ ပြန် ရယ်ပြကြပါတယ် …
“ ဟဲဟဲ … ဟဲဟဲ ”
ယမမင်းကြီးက ဒေါ်လာတွေကို ကြည့်ရင်း `တက်´ ထပ်ခေါက်တယ်။
လေသံနည်းနည်း ပျော့သွားရင်း …
“ ငါတစ်ယောက်တည်းရဲ့ ဆန္ဒအရ ဆိုရင် … မင်းတို့ … ကွာ ”
ယမမင်းကြီး တစ်ခုခုကို အလိုမကျ ဖြစ်နေတဲ့ အသံနဲ့ ပြောတယ်။
ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်း အဆင်ပြေပြီ ထင်ပြီး … ဟဲဟဲ … ဟဲဟဲ နဲ့ ထပ်ရယ်ပြနေကြတယ်။
“ ဒါပေမယ့် … ”
ယမမင်းကြီးဆီက အသံ ထွက်လာတယ်။
ယမမင်းကြီးက ဆက်ပြောတယ် …
“ လွှတ်တော်ကို တင်ပြ ရဦးမယ် … ”
“ ဗျာ … ” “ ဗျာ … ”
ဒီတခါတော့ ဟိုနှစ်ယောက် တပြိုင်တည်း အသံ မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ ကြောင်းတူ သံကွဲ ဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒီမှာ ယမမင်းကြီးက မလုံမလဲအသံနဲ့ မိန့်ခွန်းရှည်ကြီး ပြောချလိုက်တော့တယ် …
“ မိဘ ပြည်သူများ ခင်ဗျား … ဟဲဟဲ … ဟဲဟဲ … ဟဲဟဲ … … ” ။ ။
(ရေးထားတာတော့ ကြာလှပြီ။ ခုမှ အောက်ဆုံးမှာ နဲနဲ အက်ဒစ်ပြီး ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ တင်ဖြစ်ပါတယ်။)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 1:32 AM
Labels: ဝတ္တုတို comments (4)
ကျနော် တော်တော်နာမည်ကြီးပြီးသည့်နောက်မှာ ကျနော့်နောက်သို့ လူတော်တော်များများ လိုက်လာကြလေသည်။
ကျနော် ကိုင်လိုက်လျှင် ရွှေတောင် ရွှံ့ ဖြစ်သည်ဟုပင် နာမည်ကြီးနေသော ကျနော်၏ ခေတ် ဖြစ်နေပါသည်။
(ထိုအချိန်ကာလက ရွှံ့များ အတော်ရှားသွား၍ ဈေးကောင်းရသောနှစ် ဖြစ်လေသည်။ ရွှံ့ဖြစ်ရာနေရာ လယ်မြေများလည်း မရှိတော့လောက်အောင် ရှားပါးသွားလေပြီ။)
ထုတ်ဝေသူ တချို့ လာကြသည်။
ဂျာနယ်လစ် တချို့ လာကြသည်။
အယ်ဒီတာ တချို့ လာကြသည်။
“ဆရာရယ် ... ဆရာ ရေးပြီးသမျှစာကို ကျနော် လာယူပါ့မယ်။ ဆရာ ရေးပြီးသမျှကို ကျနော်တို့ ထည့်ပါ့မယ် ဆရာ”
ဒါတော့ လွန်ပြီ။ ကျနော် တော်တော် တင်း သွားသည်။
(သို့ ... ဒါရိုက်တာ ... ဤနေရာတွင်အေသင်ချိုဆွေ၏ သီချင်းကို ဇာတ်ဝင်သီချင်းအဖြစ် မထည့်ဖို့ အနူးအညွတ် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ဤအကွက်များသည် ရိုးလွန်းနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် သင်ထည့်မိလျှင် ကျွန်ုပ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ကို ကျွန်ုပ် အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်စာ ပို့ပြီး ဖြစ်သည်။)
“ခင်ဗျားတို့ လက်လွတ်စပယ် မပြောကြနဲ့ဗျ ... ကျနော် ရေးသမျှ ထည့်မယ် ဟုတ်လား? ... ကျနော်က စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ခံစားမိတဲ့အတိုင်း သီချင်းစာသားတွေ ချရေးနေမိတဲ့ အချိန်တွေလည်း ရှိတယ်ဗျ။ ... ကဲ ... အဲဒါတွေရော ခင်ဗျားတို့ ထည့်မှာလား ...?”။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:04 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (2)
ငါ့ကို ခွင့်လွတ်ပါ ... ကဗျာ ရယ် ...။
မိုး ..... ဆိုတော့လည်း ...
... ငါ့ စိတ်တွေ ... ရွဲတယ်။
ငါ့ ဒိုင်ယာရီထောင့်မှာ ခိုကပ်မနေဘူး။
သော့ကို ရှာဖို့ မေ့လျော့ .....။
မော/တိုးလျစွာ ကံကြမ္မာကို မေးမယ် ...
သေခြင်းကို သွားဖို့ရာ ...
ဘယ်လမ်းက ... အနီးဆုံးလဲ?။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 5:47 PM
Labels: ကဗျာ comments (2)
ကျွန်တော်၏ ဇာတ်လိုက် ကိုလေးဖြူသည် unplugged ရှိုးပွဲတစ်ခု သီဆိုဖျော်ဖြေရန် ဟိုတယ်တစ်ခုရှိ ခန်းမအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာလေသည်။ သို့သော် စားပွဲအသီးသီးတွင် ထိုင်နေကြသော ဂျာနယ်လစ်များ၊ ပရိတ်သတ်များနှင့် ဘာမသိညာမသိလူအများကမူ တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်ကြချေ။ ထူးတော့ ထူးနေလေပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နာမည်အကြီးဆုံး အဆိုတော်ကြီး ဝင်လာသည်ကို မြင်နေသော်လည်း တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်ကြသည်မှာ ထူဆန်းလေသည်။ ပရိတ်သတ်များနှင့် ဘာမသိညာမသိလူအများက မလှုပ်သည်မှာ သိပ်မထူးဆန်းသော်လည်း ဂျာနယ်လစ်ဆိုသူများ မလှုပ်သည်မှာ တော်တော်ကြီးကို ထူးဆန်းနေလေသည်။
“ ဘယ်သူမှ မမှတ်မိကြပါလား ”
ထို့ကြောင့် ကိုလေးဖြူ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်စစ်ရလေသည်။ ထိုအခါ … တွေ့ပါပြီ။ ကိုလေးဖြူသည် သူ၏မျက်နှာကို ပြန်စမ်းကြည့်သောအခါ နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေး၊ ပါးသိုင်းမွှေးများ မရိတ်တာကြာ၍ တော်တော် ရှည်နေကြောင်း တွေ့ရလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဘယ်သူမှ သူ့ကို မမှတ်မိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိသွားသော ကိုလေးဖြူသည် ထို အမွှေးများကို ရိတ်ရန် အိမ်သို့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိုက်သည်။
ဤဟိုတယ်တွင် သူ့အတွက် ပြဿနာ နည်းနည်းရှိသည်။ ဟိုတယ်တွင် အားအားယားယား ဘယ်သူကမှန်းမသိ မွေးထားသော ခွေးနှစ်ကောင်၏ ပြဿနာဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ခွေးနှစ်ကောင်မှာ လိမ္မာသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ … ကိုလေးဖြူကိုတော့ မှတ်မိသည်။ ရိုးရိုးမှတ်မိတာမဟုတ်။ ဆံပင် ရှည်ရှည် အရပ် ကလန်ကလားနှင့် ကိုလေးဖြူ ဝင်လာတိုင်း အစဉ်အလာမပျက် ထွက်ဆွဲ တတ်လေသည်။ ကိုလေးဖြူ ဤဟိုတယ်ကိုလာတိုင်း ပြေးရတာ အမော။
အလာတုန်းကတော့ ကားပေါ်မှမဆင်းခင်ကပင် လုံခြုံရေးလေးကို ခေါ်ကာ သူ့အကာအကွယ်ဖြင့် လာခဲ့သောကြောင့် ထို ခွေးနှစ်ကောင်ကို အရိပ်ပင် မမြင်ခဲ့ရ။ ယခု ပြန်အထွက်မှာတော့ ဘာလုံခြုံရေးမှ မရှိတော့။
ထိုစဉ် … ကိုလေးဖြူ တစုံတစ်ရာကို သတိရလိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ရဲရဲဝင့်ဝင့်ပင် နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်လိုက်သည်… ။
သုံးလှမ်း ………။ ဝုတ် …. ဝုတ် ….။ ခွေးနှစ်ကောင် ထွက်ဆွဲလေပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း ကိုလေးဖြူလည်း သူ့ကားဆီ အရောက် ပြေးရပြီ။
ဝုန်း …. ဂျိမ်း …။ ကားဆီအရောက် ကားပေါ်ပြေးတက်ကာ ကားတံခါး ဆွဲပိတ်လိုက်ပြီးသောအခါ ကိုလေးဇြူ ခွေးနှစ်ကောင်၏ အန္တရာယ်က လွတ်လေပြီ။
“ဟောဟဲ.. ဟောဟဲ … ဟဲ့ခွေး … တောက် … မင်းတို့ကတော့ ငါ့ကို မှတ်မိတယ်ပေါ့လေ … ကောင်းကွာ”
စိတ်ညစ်ညစ်နှင့်ပင် အိမ်သို့ မောင်းလာခဲ့ရာ လမ်းတွင် ကားတစ်စီးက လမ်းပိတ်ကာ တားပြီး လူနှစ်ယောက်ဆင်းလာကာ …
“ကိုလေးဖြူ …. ”
ခေါ်သံနှင့်အတူ လွယ်အိတ်ဘေးတစောင်း လွယ်ထားကြသော ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ယောက်။
“ကျနော်တို့နဲ့ ခဏ လိုက်ခဲ့ပါ … မေးစရာလေး နည်းနည်း ရှိလို့ပါ …”
ဘယ်လို အကြောင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုလေးဖြူမလိုက်ချင်ပါ။ ရှိုးပွဲက အရေးကြီးသည်။ ကတိပေးထားပြီးပြီ။ သွားကို သွားမှ ရမည်။ ဒီလူနှစ်ယောက်ကလည်း မရမက ခေါ်မည့်ပုံ ပေါက်နေသည်။
ထိုစဉ် … ကိုလေးဖြူ တစုံတစ်ရာကို သတိရလိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ကို ပုံမှားရိုက်ရန် စဉ်းစား၍ ပြောလိုက်သည်။
“ခင်ဗျားတို့ လူမှားနေပြီထင်တယ်ဗျ … ကျနော် လေးဖြူမဟုတ်ပါဘူး …”
ထိုလူနှစ်ယောက် နည်းနည်းတော့ ကြောင်သွားသည်။ ကိုလေးဖြူကို သေချာ ထပ်ကြည့်ရင်း ပြောသည်။ ဒေါသလည်း အနည်းငယ် ထွက်လာပုံ ရသည်။
“မနောက်ပါနဲ့ဗျ။ ကျနော်တို့က တာဝန်အရပါ။ ခင်ဗျား လေးဖြူဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားကို မမှတ်မိစရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘူး။ အေးအေးဆေးဆေးသာ လိုက်ခဲ့ပါ။ ကျုပ်တို့ကို ဘာကောင်တွေ မှတ်နေလဲ …”
ထိုစဉ် … ကိုလေးဖြူ တစုံတစ်ရာကို သတိရလိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုလေးဖြူက ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နှင့် …
“မင်းတို့ကလည်း ငါ့ကို မှတ်မိတယ်ပေါ့လေ …။ အေးပါ .. မင်းတို့ ဘာကောင်တွေလည်းဆိုတာ ငါသိသွားပါပြီ”
ကြေငြာလာနေတာမဟုတ်ပါ။ ဤတွင် ကျွန်တော်၏၀တ္တု ပြီးပါပြီ။ ။
( ဤ၀တ္တုတွင် ကိုလေးဖြူ၏ အမည်ကို အသုံးပြုထားသော်လည်း ကာယကံရှင် ကိုလေးဖြူထံမှ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါ။ ဤ၀တ္တုကြောင့် ကိုလေးဖြူ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ တစုံတရာကို မထိခိုက်နိုင်ဟု ယုံကြည်မိသောကြောင့် ရေးမိ တင်မိပါသည်။ ကိုလေးဖြူကို ချစ်သောစိတ်ဖြင့် ဇာတ်လိုက်တင်ရေးမိခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရာမှာ စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်။)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 5:44 PM
သူတို့ ငါ့ကို စ ညာနေကြပြီ
အပြုံးတ၀က် ဆိုပေမယ့် ...
ကျနော် ... ယုံပေးလိုက်ပါတယ် ...။
ဒီလိုပါပဲ ... လောကကြီးရယ် .....။
ဟန်ဆောင် မကောင်းတဲ့ ကောင်ပါ ...။
.... .... ပြောချင်တယ် ...။
ကျနော်က ... `၀´လုံးလေးဗျ ...။
အဲဒါ ... ကျနော် `မဲ့´ လိုက်တာ ...။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:22 PM
Labels: ကဗျာ comments (3)
ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အိမ်ခြံဝင်းတံခါးအပြင်ကို ထွက်ပြီး ကျနော် ခေါ်လိုက်ပါတယ် …။
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ စကားပြောဖော်မရှိလို့ ခေါ်မိတာ ..။
အလုံးအရင်းနဲ့ကို ရောက်လာတာ …။
သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ကျနော် စိတ်ပျက်သွားတယ် …။
ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ်ခေါ်ထားတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်နှင်ရတယ် …။
“ ဟာဗျာ … သွားတော့ သွားတော့ … ကျနော် စကားမပြောချင်တော့ဘူး ”
အဲဒီ ၀ိညာဉ်တွေကလည်း ကျနော့်ကို ပြန်စိတ်ပျက်သွားတယ်။
“ ဘာလဲဟ … ”
“ ဘယ်လိုကောင်ပါလိမ့် ... ”
“ ….. ….. ….. ”
အသံမျိုးစုံ ရေရွတ်ရင်း ၀ိညာဉ်တွေ အလုံးအရင်းနဲ့ပဲ ပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်။
၀ိညာဉ်အိုကြီး တစ်ယောက်/ တစ်ကောင်/ တစ်ခုကတော့ ပြန်မသွားသေးပဲ ကျနော့်ကို နားမလည်သလို ကြည့်ပြီး မေးတယ် …။
“ နေပါဦး … မင်းပဲ ငါတို့ကို ခေါ်တာလေ … ခုတော့ ဘာမှ မပြောပဲ ဘာလို့ ပြန်နှင်ထုတ်ရတာလဲ ”
ကျနော် စိတ်ပျက်လက်ပျက် / မပြောချင်ပြောချင်/ စိတ်မပါ့တပါ နဲ့ပဲ ရှင်းပြလိုက်ရတယ်။
“ ဟုတ်ပါတယ် … ကျနော် ခေါ်တာပါ … ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ကို ကြည့်ပြီး ကျနော် စကားပြောချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး ”
၀ိညာဉ်အိုကြီးက ပြန်မေးပါတယ် …။
“ အေး … အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ”
“ ခင်ဗျားတို့က နာမ်ချည်းပဲကိုး … ရုပ်မှ မပါတာ …”
ကျနော့်အဖြေကို ကြားတော့ ၀ိညာဉ်အိုကြီး မကျေမနပ် ဖြစ်သွားပါတယ်။
ပြီးတော့ ကတ်ကတ် မလန်တလန်နဲ့ ကျနော့်ကို ပြန်ရန်တွေ့ပါတယ် …။
“ အော် … ငါတို့ကလည်း မင်းလို ခေါင်းမရှိတဲ့ ကောင်နဲ့ စကား မပြောချင်ပါဘူး ”
ကျနော် ကြောင်သွားတယ်။ ကိုယ့်ခေါင်းကိုယ် ပြန်စမ်းရင်း သူ့ကို ပြရတယ် …။
“ ခေါင်း … ရှိပါတယ်ဗျ … ဒီမှာလေ … ကျနော့် ခေါင်း ”
“ ငါတော့ … မမြင်ဘူးကွ … ”
၀ိညာဉ်အိုကြီးက ခေါင်းခါရင်း ပြောပါတယ် …။ ( ဟင့် … ရုပ်ရှိတဲ့ ကျနော့် ခေါင်းကို မမြင်ပဲ ခါနေတဲ့ အဲဒီင်္ နာမ် ခေါင်းကြီးကို ကျနော် မြင်ရတယ် …။ မုန်းလိုက်တာ … )
“ မင်း … တော်တော် စားသလား ”
၀ိညာဉ်အိုကြီးက မေးတာပါ။ ကျနော် ထပ်ကြောင်သွားတယ် …။
“ ဟင် … ဘာ … ဘာလဲ ”
“ မင်း … တော်တော် စားသလားလို့ ”
ကျနော် သဘောပေါက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူမြင်သလား၊ မမြင်သလား မသိပေမယ့် ကျနော် ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးရင်း ပြန်ပြောရတယ် …။
“ အဟဲ … ဟဲဟဲ … စား … စားပါတယ် ”
“ ဪ … ဪ … အဲဒါကြောင့်ကိုး … ”
၀ိညာဉ်အိုကြီးက သူ့နာမ်ခေါင်းကြီးကို တငြိမ့်ငြိမ့် လုပ်ရင်း ပြောပါတယ်။
ကျနော် သုံးခါမြောက် ထပ်ကြောင်ရပါတယ် …။
“ ဘာ … ဘာဖြစ်လို့လဲဟင် ”
“ မင်းက လူတော့ … လူပဲကွ … ”
“ ဟုတ် … ဟုတ်တယ်လေ … ”
“ ဒါပေမယ့် … စားလွန်းလို့ ခေါင်းမရှိတာလား … ခေါင်းမရှိလို့ စားတာလားတော့ မသိဘူးပေါ့ကွာ… ”
ကျနော် လေးခါမြောက်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ကြောင် သွားပါတယ်။ ကိုယ့် ခေါင်းကိုယ်လည်း မယုံမရဲနဲ့ ပြန်စမ်း ကြည့်ရတယ်။
၀ိညာဉ်အိုကြီးက နောက်ဆုံးစကား ပြောပါတယ် …။
“ မင်းကတော့ … ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသိတာ နေမှာပါကွာ … အခု … မင်းက ဘဲဥကြီး ဖြစ်နေပြီကွ … ”
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ကျနော် ထိုင်နေတုန်း နယ်က ကဗျာဆရာတစ်ယောက် ၀င်လာတယ် …။
ကျနော့်ဝိုင်းမှာ ၀င်ထိုင်ရင်း ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။
နာမည်တွေ အကြောင်း စကားစပ်မိရင်း သူက ပြောတယ် …။
“ ငါတို့မြို့မှာ ရှိတယ်ကွ … ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် … နာမည်က အေးအောင်နဲ့ အောင်အေး တဲ့ကွာ … သူ့မိဘတွေက ဘယ်လို စိတ်ကူးနဲ့ ပေးခဲ့ကြတယ် မသိဘူး ”
ကျနော် နားလည်သလို အပြုံးနဲ့ သူ့ကို ပြန်ပြောရပါတယ် …။
“ ဪ … မင်းတို့ ပြောပြော နေသလိုပေါ့ကွာ … စကားလုံး ရှားပါးမှုဆိုတာ … ”
ကျနော့် သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာ ဘာမှ ပြန်မပြော နိုင်ပါဘူး။
( သူ့မှာကလည်း အာမေဋိတ်တွေ ရှားပါးနေလို့ ထင်ပါတယ်လေ။ )
ကျနော်နှင့် ပညာတတ် အသိုင်းအ၀ိုင်း
“ မင်း မယုံမရှိနဲ့ … ငါက ပညာတတ် အသိုင်းအ၀ိုင်း ကကွ … ”
လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ထဲမှာပဲ ကျနော် ကြွားနေတာပါ။ ( ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ် ကြွားလို့လည်း ရတာမှ မဟုတ်တာ။ )
“ ငါ့အဖေက ဆယ့်နှစ်ကြိုး ဦးမိုး ”
“ ငါ့အမေက ကဝေပညာရှင် ရတနာခင် ”
“ ငါ့ဦးလေးက အောက်လမ်း တဆုံး မောင်ဖိုးလုံး ”
“ ကဲ … ငါမပြောဘူးလား … ငါက ပညာတတ် အသိုင်းအ၀ိုင်းကပါလို့ … လက်ဖက်ရည်ဖိုး မင်း ရှင်းလိုက်တော့ ”
ပြောပြီး ကျနော် ထ ပြန်ခဲ့လိုက်တယ်။ သူ ထ မရိုက်ခင်ပေါ့ …။
အခု ရေးပြီးတဲ့ ၀တ္တုကို IDEA မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကို သွားပို့တော့ အစ်မ မနော်ဟရီနဲ့ တွေ့ပါတယ်။
မြို့ထဲရောက်ရင် သူ့ဆီကို ၀င်မယ်လို့ ပြောထားတာကို သတိတရနဲ့ …
“ အော် … ဆရာလေး မြို့ထဲရောက်လို့ ၀င်လာတာပေါ့လေ … ”
“ ဟုတ်တယ်ဗျ … ကျနော်လည်း ဒုတိယမြို့ထဲမှာပဲ ကျင်လည်နေတာ … ပထမမြို့ထဲကို အရောက်အပေါက် နည်းတယ် … ”
အစ်မ မနော်ဟရီ ကြောင်သွားပါတယ်။
“ ဘာလဲဟဲ့ … ဒုတိယမြို့ထဲ ဆိုတာ … ”
“ လှည်းတန်း တ၀ိုက်ကို ပြောတာပါ အစ်မရယ် … ”
သူ သဘောပေါက် သွားပါတယ်။ ( အေးလေ … သူလည်း ဂျာနယ်တွေ ဖတ်ထားမှာပေါ့ )
နောက်မှ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ ဒီတခါ ကျနော် ကြောင်ကလှည့်ပါ။
“ ဒါနဲ့ … နွေဆူးလင်္ကာ … နင်က နာမ်ချည်းပဲကိုး … ရုပ်က ဘယ်နား ထားခဲ့လို့လဲ …”
“ ဗျာ … အဲ ”
(၀တ္တုအစ က ၀ဋ် … ၀တ္တုအဆုံး မှာကို လည်တော့တာပဲ။)
ကျနော်ကလည်း စိတ်ကူးနဲ့ စာမူ သွားပို့နေတာကိုး … ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 12:13 PM
ချောင်းကို ပစ်ပြီး ...
မြစ်ကို ရှာတာ မဟုတ်ရပါဘူး ...။
ကောင်းကင်ကို ရှာမိတာပါ ...။
... ကျန်ရစ်တယ် ....။
ပြန်ပြောလို့ မရမယ့် အတူတူ ....။
ကျနော်လည်း မရှိခဲ့ဘူး ....။
ရှိခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး ......။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 12:11 PM
Labels: ကဗျာ comments (5)
နောက်မှ သိရတယ် ...။
ဒါနဲ့ ... စောဒကတက်မိတော့
နောက်တစ်ဝါ ပြတယ် ...။
ခင်ဗျားတို့ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ...။
ဘော်လုံးကွင်း တစ်ကွင်းပါပဲ ...။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 3:42 PM
ဘယ်သူမှ မဖတ်ချင်တဲ့ ကဗျာ
ဘယ်သူက ပြောလဲ ?
စကား နည်းခဲ့ရတယ် ...။
အတွေ့မခံတာပါ ...။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:13 PM
Labels: ကဗျာ comments (7)
နင့်အပြုံးတွေကို ငါ ကောက်သိမ်းထားတယ်
နင့်အတွက် အသုံးဝင်ရင် ...
ငါ ... မုန်းတယ် ...။
နင့်ကို ငေးကြည့်နေမိတဲ့အခါ ...
ကြယ်တာရာ အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်သလိုမျိုး .......
ငါ့ကို “အရူး”လို့ ခေါ်ပါကွယ် ...။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 4:39 PM
ရင်ကွဲ ပက်လက် ကဗျာ
ငါ့ကို ... ထားခဲ့လိုက်ပါ ...
အသက်ရှင်ခွင့် မရမှတော့ ...
မမြင်ချင်တဲ့ အခါ ...။
ကယ်တင်ခွင့် မရတော့တဲ့ အခါ ...။
ထားလိုက်ပါ ... ဧရာဝတီရယ်
ဆက် ... စီးဆင်းကြတာပေါ့ ...။ ။
၃၀ . ၉ . ၂၀၁၁
ထူးထူးဆန်းဆန်း စောစောစီးစီး နိုးနေတဲ့ ဒီမနက်က ရေးလိုက်တဲ့ ကဗျာပါ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်သွားတယ်။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 12:16 PM
အရောင် မရှိတဲ့ ကဗျာ
ငါဟာ... ပွင့်စရာ အပင်မရှိတဲ့
ဂျစ်ပစီ ပန်းတစ်ပွင့်ရယ်ပါ ...။
ရာသီဥတုနဲ့ မကိုက်ညီခဲ့ဘူး ...။
မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာပါကွယ် ...။
နာမ၀ိသေသန မရှိတဲ့ ကောင်ကလည်း
မွှေးပြနိုင်ပါတယ် ...။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:22 PM
လူစွမ်းကောင်းလုပ်ချင်လို့ ...။ ။
(ကျနော် ပထမဆုံး မြင်ဖူးတဲ့ ကျနော်ရဲ့ ပုံနှိပ်ကဗျာလေး ဖြစ်ပါတယ် ....
အဲဒီအတွက် အစ်မ မနော်ဟရီကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ...)
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:09 PM
ဒီထက်ပိုပြီး ဘာမှ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကဗျာ
ငါ့ကိုငါ မုန်းနေတယ် ...။
တည်ငြိမ်ချင်ယောင် ဆောင်နေခဲ့ရ ...။
ဝုန်းဒိုင်းကြဲ နတ်သမီးပေါ့ ...။
နင့်ကို ချစ်သွားခဲ့မိတယ် ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 11:55 AM
Labels: ကဗျာ comments (9)
မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကို လွှမ်းစေရမည်
ဟိုတလောက ELEVEN ဂျာနယ်မှာ ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ်ဖတ်မိပြီး စဉ်းစားမိတာလေး ပြောပါရစေ။
၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာလမှာ SEA Games ဆိုတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကြီး လာတော့မယ်လေ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေဟာ အိုလံပစ်အားကစားနည်းတွေ မဟုတ်တဲ့ ရိုးရာအားကစားနည်းတွေကို ထည့်သွင်းပြီး ရွှေတံဆိပ်တွေ ယူကြတယ်တဲ့ဗျ။ ပြီးတော့ သူတို့ဆုမရနိုင်တဲ့ အိုလံပစ်အားကစားနည်းတွေကိုလည်း ဖြုတ်ထားတတ်တယ်တဲ့ဗျ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံအလိုက် ရပ်တည်မှုထိပ်ဆုံးနေရာကို ယူတတ်ကြတယ်တဲ့။
ထားပါတော့ ....။ ကျနော်ပြောချင်တာက ၂၀၁၁ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၃ SEA Games ကို မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမှာလေ။ အဲဒီအခါ ကျနော်တို့လည်း ရွှေတံဆိပ်တွေ ကြံဖန်ယူဖို့ လိုလာပြီ မဟုတ်လား။ အဲဒါကြောင့် ရိုးရာအားကစားနည်းဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ ဟာလေးတွေကို ဉာဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဗျ။
(ဝါးလုံးတန်းပေါ် တက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခေါင်းအုံးနဲ့ ရိုက်ရတာလေ။ အောက်ကျသူအရှုံး ...)
(ဒါတော့ မြင်ဖူးကြမှာပါ ...)
(နှစ်ယောက်တွဲ ပြိုင်ပွဲပေါ့ ... ဒါလဲ မြင်တယ်မဟုတ်လား ...)
၄။ ထုပ်ဆီးတိုး ပြိုင်ပွဲ
( အသင်းလိုက် အားကစားနည်းပေါ့ဗျာ ...)
(လက်တောက်ခုံပေါ့ဗျာ ... စနူကာနဲ့ ဘိလိယက်ပြိုင်ပွဲကို ဖြုတ်မယ်ဗျာ ... အမယ် .. ခုနောက်ပိုင်း လက်တောက်ခုံတွေကလည်း pool table တွေလို ကျင်းခြောက်ကျင်း ဖြစ်နေပြီဗျ ..)
(ဒါလည်း အတူတူပဲလေ ... စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲကို ဖြုတ်မယ် ...)
မြန်မာတွေ ဆုမရနိုင်မယ့် အားကစားနည်းတွေကိုလည်း အရှက်မရှိ ဖြုတ်ဖို့ လိုမယ်ဗျ။ ခု လာမယ့် အင်ဒိုနီရှား SEA Games မှာ သူတို့ ဆုမရနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲကို ဖြုတ်သလို ကျနော်တို့လည်း အမျိုးသားဘော်လုံးပြိုင်ပွဲကို ဖြုတ်ထားဖို့ လိုမယ် :-)
ကျနော့် စာကို ဖတ်မိတဲ့ သူတွေကလည်း စဉ်းစားမိသမျှ ရိုးရားအားကစားနည်းလေးတွေကို ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ...။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 1:11 PM
Labels: ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ရေးတဲ့စာ comments (7)
ခွာသံပြင်းပြင်း ရွှေဘိုမြင်း.... ...အောင်မြေနင်းကာ အောင်ရမည်။ အောင်ဇေယျသွေး ရဲနီစွေး ..... ......သမိုင်းကြွေးတွေ ဆပ်ရမည်။ သပြေညိုပန်း ဆက်ကာလှမ်း ... .....ချီတဲ့ပန်းတိုင် ရောက်ရမည်။
м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я
ချစ် ခင် မြတ် နိုး ခြင်း … မေ တ္တာ များ စွာ ဖြင့်
Result of True Learning
ပိုင် ရဲ့ မွန်ဂို ၄၀
T H03 H T4N3[aN T I Ma]
မြန်မာ့တပ်မတော် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၃ ဦးအား အကြောင်းမဲ့ ရိုက်သတ်
အခုဆို မြို့ဟာ ခိုတွေမရှိတော့ဘူး ။
ကန့်သတ်ချက် မရှိတဲ့ ကောင်းကင်
ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ...
Latest Activity on သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး နှင့် ထောက်ပံ့ရေး
traci tipssi postedastatus
Hands On & Review Asus Zenfone3Deluxe
Hunting Tips And Tricks For The Midwest
လွတ်လပ်ခြင်းကို ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ခံစားနေကြရသူများ
New Shiny Era
The Main Antagonist of Your Organic Gardening Venture (part2of 2)
What is differences between Myanmar and India
My Emotional Vision
Windows 8 မှ Windows7သို့ပွောငျးနညျး
NLD နှင့် ILO အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ အား သင်တန်းပေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေး မှု
♥ ♥ ♥ အတ္တပုံရိပ် ♥ ♥ ♥
~ Larva ~
“ ဖြတ်မျဉ်းများ “
Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း ၊သမီးလေး-မေမြတ်နိုးခိုင်မိသားစု(ရန်ကုန်)မှ သမီးလေး-မေမြတ်နိုးခိုင်၏ မွေးနေ့အရုဏ်ဆွမ်းအလှူနှင့် ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင်အလှူရှင်များ မွေးနေ့ဆွမ်းအလှူ ၂၃.၈.၂၀၁၃
သူ .... သိစေ။
နေပြည်တော် သမ္မတရုံးက ခန်းညားလှတဲ့ ပုပ္ပါးတောင် ။
"သူ မသိအောင်ရေးတဲ့ ရည်းစားစာ"
" ရဲရင့်နီ "
"And you know what makes you smile? True joy comes from helping others in hardship, and because I've gone through this, I know what hardship entails."
Winamp Media Player 5.6
ရှစ်လေးလုံးအကြို လူ့ဘောင်သစ်လူငယ် YNS လှုပ်ရှားမှု
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ တော်.....
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့မင်္ဂလာဖိတ်ကြားစာ
Published and submitted Papers
To raise women rights and gender awareness
Standard Method of Detailing Structural Concrete (ebook)
Manchester သွား တောလား
မေလေးရဲ့ အလွဲများ ၃
" ကဗျာရေးတဲ့ကျောက်စာ " ( မွေးနေ့ အမှတ်တရ )
တာ ရာ မ ရှိ တဲ့ ကောင်းကင်
မြို့ ပြ ကဗျာနေထိုင်မှု
အရည်ကူးခြင်း၏ မိုင်တိုင် အဆုံး
၂၂ နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံနေ့ အခမ်းအနား
အရှိ ... ... ...
BEAUTY FOR YOUR LIFE , FAMILIES AND ENVIRONMENT
စိုးဧပရယ်မွန် FLASH သီချင်းများ
Agel MM World Team
♫♫ Gyp Gyp Gypsy Doll ♫♫
ပင့်ကူအန် တိမ်တိုက်၊ ဆူးရင့်၊တန့်ဆည်၊
သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု...
969 Myamar Cartoon
☺♣.•♣ တောသူမလေးမှ...နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏။ ♣•.♣☺
Private Thoughts ofaWoman
အိပ်မက်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကူးတွေက ကိုယ့်ကိုပြန်ပြောပြနေတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပေါ့
အရောင် အနံ့ အရသာမရှိတဲ့ တေလေ
World of Our Own [ J - P - Z ]
အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရ နေ့ရက်များသို့
Hello ! Meilay
Gyit Gyit Blog!!
LAN PYA KYE
Dream of pinkgirl
Pwo Karen - Myanmar - English Online Dictionary